लिखित जवाफ सहित आफै पुगे लोकमान सर्बोच्च, ‘म्याद तामेली आफु बसेको सरकारी क्वार्टरमा नपठाएर आफ्नो भाडाको घर मा पठाएको”भन्दै दिए जवाफ! – ZoomNP
लिखित जवाफ सहित आफै पुगे लोकमान सर्बोच्च, ‘म्याद तामेली आफु बसेको सरकारी क्वार्टरमा नपठाएर आफ्नो भाडाको घर मा पठाएको”भन्दै दिए जवाफ! प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर ०१, २०७३ समय - ०:०६:१४ ३० कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गेका छन् ।
विगतमा सर्वोच्चको आदेशलाई अवहेलना गर्दै आएका कार्की यस पटक भने आफैँ उपस्थित भएका हुन् ।
उनी सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेलीमा अवरोध पु¥याएकोमा कारबाही गर्न नपर्ने भए एक हप्ताभित्र आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । कार्की त्यही आदेशअनुरुप लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
कार्कीको लिखित जवाफमा आफू घटना भएको भनिएको दिन विदेशमा रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको उल्लेख छ । उनले लिखित जवाफमा आफू सपरिवार अख्तियारकै परिसरभित्र बसोबास गर्दै आएको र पुरानो बानेश्वरस्थित घर भाडामा दिएकाले निजी निवासमा नभई सरकारी निवासमा यसअघि पनि सर्वोच्चका कर्मचारीले म्याद बुझाएकाले न्यायिक प्रक्रियामा आफूले कुनै अवरोध नगरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तीन वर्षदेखि आफूसहित सपरिवार सरकारी निवसमा बसेको छु, भाडामा दिइएको घरमा म्याद तामेली गर्न किन परेको र सरकारी निवासमा गर्न किन नआएको’ उनले भनेका छन् ।
अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति विवादलाई फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णयको म्याद तामेली गर्दा अवरोध पु¥याएकामा कारबाहीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।